Otu esi etinye GNOME 40 Desktop na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye GNOME 40 Desktop na Ubuntu 20.04
November 2, 2021 October 19, 2021 by Jọshụa James
Ịdọ aka ná ntị na GNOME 40
Wụnye PPA achọrọ maka GNOME 40
Wụnye GNOME 40 Desktop Environment
Lelee GNOME 40 Desktop Environment
Nyochaa GNOME 40 Desktop Environment
Otu esi emelite GNOME 40 Desktop
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye ihe ọhụrụ GNOME 40 na desktọpụ Ubuntu gị.
Emebere nkuzi a iji kwalite sistemụ Ubuntu gị gaa na GNOME 40 kachasị ọhụrụ site na iji PPA enweghị ntụkwasị obi. PPA nke a ga-arụnye bụ nke amara nke ọma ma bụrụkwa nke ọma na ọ nweghị ihe ọjọọ ọ bụla. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ọ dị mma iji na-enweghị ike nwelite mmelite na-akwụghị ụgwọ na-emebi sistemu gị.
Kwadebe ma nwee nkwado ndabere na mpaghara mgbe ị na-etinye ma na-emelite ngwugwu ọ bụla n'ọdịnihu metụtara GNOME 40 site na PPA a ma ọ bụ usoro ntinye ọzọ ị nwere ike ịhọrọ..
Mbụ, ị ga-achọ ịwụnye PPA abụọ iji wụnye GNOME 40 nke ọma. Ndị PPA niile si n'otu onye na-elekọta ya Taha Nouibat.
Mbụ, wụnye "X11" ebe nchekwa iji dozie ndabere gnome-shell.
Nke abuo, wụnye GNOME 40 PPA, nke achọrọ maka ụfọdụ ndabere achọrọ.
Mara, ị nwere ike ịhụ mmapụta mperi. Ị nwere ike ileghara ndị a anya ka ha ga-apụ n'anya ozugbo ị wụnye GNOME 40 ọhụrụ.
Ozugbo ịmechara mbubata, mee mmelite iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ.
Site na PPA atọ dị iche iche arụnyere na emelitere na ndepụta nchekwa gị, nzọụkwụ mbụ bụ ịwụnye gnome-shell.
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" na-aga n'ihu.
Na-esote, ebe nchekwa ahụ agbakwunyela mgbakwunye ndị chọrọ imelite. Tupu ịmalitegharịa, ịkwesịrị imelite ngwugwu ndị a.
Rịba ama na nke a nwere ike iwe obere oge. Enwere ọtụtụ ngwugwu iji kwalite na ịwụnye. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ngwungwu ọ bụla ka emelite, ị nwere ike ịfegharịgharịa iwu mmelite dabara adaba, ma ha kwesịrị ịpụta.
Ozugbo emechara, ịkwesịrị ịmalitegharị sistemu gị ka mgbanwe wee malite ịrụ ọrụ nke ọma.
Ozugbo ịmaliteghachi usoro Ubuntu gị, ị ga-ebu ụzọ bịa na ihuenyo nbanye ọhụrụ dị iche na isiokwu ọhụrụ mara mma.
Mbụ, ịkwesịrị ịgbanwe njikwa ngosi. Emere nke a site na ịpị bọtịnụ nhazi dị n'akụkụ aka nri elu nke mpio nbanye, n'aka nri nke aha njirimara gị, wee họrọ nke ọ bụla. "Ubuntu na Wayland" or "Ubuntu na Xorg" kama "Ubuntu."
A nwalere na nchịkọta Xorg bụ eziokwu. Nhọrọ a bụ nhọrọ n'etiti Xorg na Wayland. Otú ọ dị, n'ịbụ ndị kwụsiri ike na ngwa, Xorg nwere ike ịbụ ihe na-adịghị ize ndụ ma dị ala na arụmọrụ. Wayland abawanyela arụmọrụ mgbe etinyere ngwa maka ya ma dịkwa nchebe karịa. Agbanyeghị, enyere ya ọhụrụ ma ka na-emegharị ya, ọtụtụ enweghị ntụkwasị obi na-eme, na-eduga ọtụtụ iji Xorg kama.
Ozugbo ịbanye, ị ga-ahụ mgbanwe UI ole na ole na ogwe ọrụ na akara ngosi.
Ngwa ndị a enweela nnukwu nkwalite ihu yana ọtụtụ ngwa ndabara arụnyere na GNOME.
Dịka, ị nwere ike ịga na “Banyere” na ntọala GUI ka ịchọta ozi sistemụ.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike kwado nrụnye. Otu ngwungwu bara uru ịwụnye bụ Neofetch.
Ekele, ị tinyela GNOME 40 ọhụrụ na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Gbaa ụkpụrụ dabara adaba maka mmelite n'ọdịnihu maka GNOME 40 gburugburu desktọpụ yana ngwugwu ndabara Ubuntu 20.04.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye GNOME 40 Desktop Environment site na iji PPA nyere. Taha Nouibat.
N'ozuzu, GNOME 40 ga-adị nnọọ iche ozugbo ị gbanwere site na ndabara GNOME 38. Ụfọdụ n'ime mgbanwe ndị a na-ahụ anya bụ akụkụ windo gburugburu, ihe ngosi dị nro nke na-enye ya ọdịdị ọgbara ọhụrụ n'etiti ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ.
Ajụjụ ọzọ bụ ị kwesịrị ịkwalite na nke a? Ikekwe ọrụ amalitelarị na GNOME 41, nke anaghị akwụsi ike. N'agbanyeghị nke ahụ, GNOME 40 sitere na PPA a etoola ma yie ka ọ kwụsiri ike, mana jide n'aka na ị nwere nkwado ndabere na mpaghara mgbe ị na-arụ ọrụ na mpaghara desktọọpụ ọ bụla ọzọ.
Categories Ubuntu Tags gburugburu Desktọpụ, GNOME, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye Slack na Fedora 35
Otu esi etinye & hazie Linux Malware Detect (Maldet) na AlmaLinux 8
2 echiche na "Otu esi etinye GNOME 40 Desktop na Ubuntu 20.04"
October 20, 2021 na 5: 23 am
Ndụmọdụ dị egwu !! Ọtụtụ ekele na arụnyere nke ọma.
October 20, 2021 na 6: 30 am
Ọ mara mma! 🙂